Condensed of Composition (ဝါကျဖွဲ့ထုံး အနှစ်ချုပ်) အပိုင်း - ၂ (Phrases) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home English Lesson Lesson Condensed of Composition (ဝါကျဖွဲ့ထုံး အနှစ်ချုပ်) အပိုင်း - ၂ (Phrases)
Condensed of Composition (ဝါကျဖွဲ့ထုံး အနှစ်ချုပ်) အပိုင်း - ၂ (Phrases)
Maung Pauk at 6:56:00 PM English Lesson, Lesson,
2. Phrases (စကားစု/ ပုဒ်)
Phrase ဆိုသည်မှာ စကားစုသာ ဖြစ်ပါသည်။ Phrase များကို လေ့လာကြည့်လျှင် ဝါကျပေါ်တွင် တည်ရှိနေသော နေရာအပေါ်တွင် မူတည်ကာ အခြေခံအားဖြင့် (၃) မျိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ _
(ဆိုလိုသည်မှ Noun နေရာတွင်ရှိသော phrase ကို Noun phrase ဟုခေါ်နိုင်ပြီး ထို့အတူ Adj, Adv နေရာများတွင်ရှိသော phrase များကို Adj phrase, Adv phrase ဟုခေါ်နိုင်ပါသည်။)
Noun phrase [ S, O, C ]
Noun နေရာတွင် တည်ရှိနေသော phrase များကို Noun phrase ဟု သတ်မှတ်နိုင် သောကြောင့် ဝါကျတစ်ကြောင်း ပေါ်တွင် Noun တည်ရှိနေသော နေရာများကို ဦးစွာသိရှိ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဝါကျတစ်ကြောင်းတွင် “ကတ္တား (Subject)”၊ “ကံပုဒ် (Object)” နှင့် “အဖြည့်ပုဒ် (Complement)” ၃ နေရာတွင် Noun ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပြီး ၎င်းနေရာများတွင် တည်ရှိနေသော phrase များကို Noun phrase များဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာဘာသာသို့ အဓိပ္ပာယ် ပြန်ဆိုရာတွင် Subject နေရာတွင်ရှိသော Noun phrase အတွက် “သည်”၊ Object နေရာတွင်ရှိသော Noun phrase အတွက် “ကို”၊ Complement နေရာတွင်ရှိသော Noun phrase အတွက် “သည်” စသည်ဖြင့် အနက်ကောက် ရပါမည်။
A tall young beautiful girl is my sister.
S ( N phrase)
အရပ်ရှည်၍ ငယ်ရွယ်ပြီး ချောမော လှပသော မိန်းကလေးသည် ကျွန်တော့် အစ်မ ဖြစ်သည်။
I sawatall young beautiful girl.
O (N phrase)
အရပ်ရှည်၍ ငယ်ရွယ်ပြီး ချောမော လှပသော မိန်းကလေးကို ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ပါသည်။
Ma Ma isatall young beautiful girl.
C (N phrase)
မမသည် အရပ်ရှည်၍ ငယ်ရွယ်ပြီး ချောမော လှပသော မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။
v what, where, when, why, whether, who စသည့် “wh” စကားလုံးများ ဖြင့်လည်း Noun phrase ကို ရေးသားနိုင်သည်။
How to do is my problem.
ဘယ်လုပ်လုရမယ်ဆိုတာသည် ကျွန်တော့်ပြဿနာ ဖြစ်သည်။
She can’t decide where to go.
ဘယ်သွားရမလဲဆိုတာကို သူ မဆုံးဖြတ်တတ်တော့ပါ။
Adjective phrase [after Noun, Complement]
Noun ၏အနောက် နှင့် Complement နေရာတွင် Adjective phrase ကိုတွေနိုင်သည်။ Noun ၏အနောက်တွင် ရှိသော Adjective phrase သည် သူ့ရှေ့မှာရှိသော Noun ကို အထူးပြုရန်ဖြစ်ပြီး Complement နေရာတွင်ရှိသော Adjective phrase ၏ရှေ့တွင် အထူးပြုရန်အတွက် Noun မရှိသော်လည်း အသံ ပိုမို သာယာစေရန်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ပိုမို လေးနက်စေရန်အတွက် Adjective အဖြစ်ရှိနေသော မူလ စကားလုံးကို Adjective phrase အဖြစ်ပြောင်းရေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ _
A man in the car is my uncle.
ကားထဲတွင်ရှိသော လူကြီးသည် ကျွန်တော့် ဦးလေး ဖြစ်သည်။
I tookabook on the table.
စားပွဲပေါ်တွင်ရှိသော စာအုပ်ကို ကျွန်တော် ယူခဲ့သည်။
Ø ပထမ ဝါကျတွင် Subject နေရာတွင်ရှိသော Noun ဖြစ်သည့်aman ကို ၎င်းနောက်တွင်ရှိသည့် in the car ဟူသည့် phrase က အထူးပြုသည့်အတွက် Adjective phrase ဖြစ်သည်။ ဒုတိယဝါကျတွင်လည်း ထို့အတူပင် ဖြစ်ပါသည်။
My mother is healthy.
My mother is in good health.
Ø healthy နှင့် in good health တွင် in good health က healthy ထက် ပိုမို အသံသာယာ သောကြောင့် Adjective phrase အဖြစ် ပြောင်းလဲရေးသားခြင်း ဖြစ်သည်။
It is important ဆိုသည်မှာ သာမန်အရေးကြီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပို၍ အဓိပ္ပာယ် လေးနက်စေလို သောကြောင့် အသက်တမျှဟူသည့် Adj နောက်တစ်ခု vital ကို ထည့်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် vital နှင့် important နှစ်ခုလုံး Adj ဖြစ်နေသည့် အတွက် important ကို noun (importance) အဖြစ်ပြောင်းပြီး ရှေ့တွင် of ထည့်ပေးရသည်။ of vital importance သည် အဓိပ္ပာယ် ပိုမို လေးနက်စေလိုသော ကြောင့် ပြောင်းလဲ ရေးလိုက်သော Adjective phrase ဖြစ်သည်။
Adverb phrase [ D, M, P, T, R or P ]
Noun phrase နှင့် Adjective phrase တို့ကို နေရာ သတ်မှတ်၍ ရသော်လည်း Adverb သည် Verb, Adjective, Adverb သုံးခုကို အထူးပြုသောကြောင့် နေရာ အတိအကျ သတ်မှတ်ရန် မလွယ်ကူပါ။ သို့ရာတွင် Adverb ကို အခြေခံအားဖြင့် အမျိုးစား ၅ မျိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ _
Direction - လားရာ/ ဦးတည်ရာပြပုဒ်စု (D)
Manner - အမူအယာပြ ပုဒ်စု (M)
Place - နေရာပြ ပုဒ်စု (P)
Time - အချိန်ပြ ပုဒ်စု (T)
Reason (or) - အကြောင်းပြချက် (သို့မဟုတ်)
Purpose ရည်ရွယ်ချက်ပြ ပုဒ်စု (R or P)
- He went up to the counter. (D)
- They play in happiness. (M)
- It is warm in the house. (P)
- He gets up at six o’ clock. (T)
- He lives to work. ( R or P)
He goes to school on foot in Insein in the morning to study his lessons.
D M P T R or P
သူ၏ သင်ခန်းစာများကို လေ့လာရန် နံနက်ခင်းတွင် အင်းစိန်မှ ခြေကျင် ကျောင်းသို့သွားသည်။
အဓိပ္ပာယ်ကို ဘာသာပြန်သည့်အခါ D, M, P, T, R or P ကို အစဉ်လိုက် နောက်ဆုံးမှ စတင်ကာ အနက်ကောင်သည်ကို မှတ်သားရပါမည်။
[ Adverb phrase များကို ဖော်ပြလိုသည့် ပုံစံအပေါ် မူတည်ကာ အရှေ့၊ အနောက် ပြောင်းလည်း ရေးသားနိုင်သော်လည်း မကျွမ်းကျင်သေးသည့် အချိန်တွင် D, M, P, T, R or P အစီအစဉ်အတိုင်းသာ ရေးသားစေလိုပါသည်။ ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်သည့် အချိန်တွင် မိမိ ဖော်ပြသလို နေရာများ ပြောင်းလဲ ရေးသားနိုင်ပါသည်။]
Adjective phrase နှင့် Adverb phrase ရောနှောနေပါလျှင်လည်း နောက်ဆုံးကသာ စတင်ကာ ဘာသာပြန်ရပါမည်။
ဥပမာ _ He goes to school in Sanchaung.
Adv (D) Adj phrase
ဖော်ပြပါ ဝါကျတွင် in Sanchaung သည် ရှေ့တွင်ရှိသော school (n) ကို အထူးပြု သောကြောင့် Adjective phrase ဖြစ်ပြီး စမ်းချောင်းတွင်ရှိသော ကျောင်းသို့ ဟု (သော)ဖြင့် အနက်ကောက် ရပါမည်။
ဖော်ပြပါ link တွင် ဆရာကြီး ဦးမြကြိုင် ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပို့ချမှုကို ကြည့်ရှုကာ လေ့လာ ဆည်းပူးနိုင်ပါသည်။
Credit to : အောင်ကိုဦး (UMK)